ယနေ့ပြဿနာအဖြေရှာရအောင်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယနေ့ပြဿနာအဖြေရှာရအောင်…
Posted by hnin sai on Jun 20, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
(၁) မတရားမလုပ်ကြပါနှင်၊့ နိုင်ထက်စီးနင်းမလုပ်ကြပါနှင့်
(၂) မည်သည်ပြဿနာမဆို ဖြစ်လျှင်ဖြစ်ချင်းတရားခံကိုရှာဖွေပြီးအရေးယူပါ
(၃) ပြဿနာဖြစ်လျှင် စတင်ပြုလုပ်သူကိုချက်ခြင်းအရေးယူပါ။
(၄) ယဉ်ကျေးလိမ်မာပြောဆိုကြပါ ၊တဦးမကြိုက်သောစကားကိုမပြောကြပါနှင့်
(ယခုလက်တွေ့ ဒုက္ခသည်တွေဆီအကူအညီလိုနေပါသည်။ ဘာသာခြားဒုက္ခသည်
(၁၁) မည်သည့်ဘာသာမဆိုလေးစားကြပါ။မလေးစားတောင် မစော်ကားကြပါနှင့်။
(၁၂) ကိုယ်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးသော၊တခြားသူများကိုလူမထင်သောစိတ်ဓါတ်များကိုဖယ်
ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် . . . . . . . .. ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူ
အားလုံးစိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေရန်မေတ္တာပေးပို့အပ်ပါတယ်. . .
ကျေးဇူးတင်ပါသည် . . .
အချို့စာကြောင်းတွေကြိုက်တယ်၊ လက်ခံတယ်။ အချို့စာကြောင်းတွေမကြိုက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားသင့်သည်များကို မှတ်သားသွားပါတယ်ရှင့်။
ခက်တော့ခက်တာပဲ ။ ပိုစ့် ပိုင်ရှင်ပြောတဲ့စကားထဲမှာ တောင်ကုတ်က လူ 10 ယောက်သတ်တဲ့ကိစ္စကိုပဲ အပ်ကြောင်းထပ်ပြောနေတယ် ။ မောင်တောမြို့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းတဲ့အကြောင်း ။ စစ်တွေမြို့ 20% ကို မီးလောင်တိုက်သွင်း တဲ့အကြောင်း ။ မောင်တောနဲ့ စစ်တွေမှာ လူ 21 ယောက်ကို သတ်တဲ့အကြောင်း ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမီးရှို့တဲ့အကြောင်း ။ လတ်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ လူ 11 ဦးကိုသတ်ပြီး အလောင်းတွေကိုပါ ဘင်္ဂါလီတွေက ယူဆောင်သွားတဲ့အကြောင်း ။ ကျောင်းဆရာကြီးအလောင်းကို အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်း ။ ဘင်္ဂါလီတွေ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းတဲ့အကြောင်း ။
အဲဒီလိုအကြောင်းတွေကိုပါ တစ်ခါတစ်လေလောက် ထည့်ပြောကြည့်ပါလား ။ လူတိုင်း အသက်နဲ့ပါပဲ ။ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ပါပဲ ။ လူ 10 ဦးအတွက် ပိုစ့်ပိုင်ရှင် အဲဒီလောက်ဒေါသထွက်နေရင် လူ 32 ယောက်နဲ့ ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ အိုးအိမ်တွေ ၊ အိမ်ခြေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက် သူတို့နဲ့ဘာသာတူ လူမျိုးတူတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက် ခံပြင်းနာကျဉ်းနေမယ်ဆိုတာ နည်းနည်းလောက်ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါလား ။ ခင်ဗျားတို့ဘာသာဝင် 10 ယောက်သတ်ခံရတော့ တောင်ကုတ်ကလူတွေက အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုသတ်တဲ့အတွက် လူရိုင်းစိုင်းတွေလို့ ခင်ဗျားတို့သုံးနှုန်းခဲ့ကြတယ် ။ အခု ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာဆူပူနေသူတွေကတော့ လူယဉ်ကျေးတွေလား ။ သူများနယ်မြေကို ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွဲနေသူတွေက လူလိမ္မာတွေလား ။ လူတစ်ယောက်ကို စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကျေးဇူးကိုမှမထောက် အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သတ်လိုက်တဲ့လူတွေကရော ………………
ဒေါသနဲ့ခံပြင်းခြင်းဆိုတာတွေကို ရင်ထဲမှာသိမ်းထားရတာ ရင်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်တော့မယ် ။ အားတင်းရင်း ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် ရင်ထဲမှာ ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေ မနည်းတော့ဘူး ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတယ်လေ ခွေးကိုချောင်ပိတ်၇ိုက်၇င် ပြန်ကိုက်တယ်ဆိုတာ .. ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ အဲဒီခွေးရဲ့မွေးရပ်မြေမှာရိုက်ခံရမှာ ချောင်ပိတ်ရိုက်တာလို့ခေါ်တာ .. ခင်ဗျားတို့မြေကတောင်မှ ခင်ဗျားတို့ကို လက်မခံတော့တာ သဘောပေါက်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်က စွန့်ပစ် ပစ္စည်းတွေလက်ခံထားရလောက်အောင် အမှိုက်ပုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ထားပါ ။
တွေကိုလိုက်မီးရှိုတာ လို့ဖေါ်ပြထားတာ. ဒါပေမယ်မွတ်ဆလင်ကျေးရွာတွေဗလီတွေအများကြီးပါသွားတာ၊စစ်တွေမှာကော
မီးလောင်တယ်တဲ့။ဓါတ်ပုံတွေကြည့်တရားခံတွေပေါ်နေတာဘဲ၊ စလုပ်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုအရေးယူရမှာဘဲ၊အခုရသေ့တောင်ကိစ္စ ရွာကိုဘယ်ကမှန်းမသိမိန်းမတစ်ယောက်လာမီးရှိုသတဲ့၊အဲဒါနဲ့မွတ်ဆလင်ရွာထဲကို အုပ်စုလိုက်သွားပြီးဒါးနဲ့ဝင်ခုတ်သတဲ့တကယ်
သေတာ ၂ ယောက် ဒါဏ်ရာရတာ၊လွင့်တာကသေနတ်နဲဘဲပစ်သလို့ပေါက်ကရရေးနေကြတာသေနတ်ကိစ္စလဲရဲမှုးကြီးရှင်းပြီးပြီ
ဘဲ ရဲကဖေါက်တာကို ဟိုရွာကပစ်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်တွေရွာကိုဝိုင်းရှိုတာတဲ့၊သေနတ်မရှိ၊မကိုင်ရတဲ့တိုင်းပြည်မှတ်ထားပါ၊
သေနတ်ရှိရင်အကုန်သေကုန်ပြီ . . ဒါကျုပ်တို့မြေဘဲ၊ကျုပ်တို့နိုင်ငံဘဲ၊လွတ်လပ်ရေးတုန်ကလဲအတူတိုက်ထားရတာ၊
ပျက်စီးတာကိုယ်ညီအကိုတွေဘဲ၊ကိုယ်ရခိုင်ပြည်နယ်လေး နယူကလီးယားကျသလို့ဘဲ ခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်တယ်၊စစ်ပွဲအတိုင်းဘဲ .
ကိုယ်အိမ်တွေကြည့်မီးလောင်ပြာကျသွားတာ၊ ဘယ်လောက်နှမျှောဘို့ကောင်းလဲ .အေးအေးချမ်းချမ်းမိုးတွင်းလေးနေရမှာကို
ခင်ဗျားတို့မနှမြောဘူးလား၊အရေးယူပါ ဘယ်ကမဆိုစတင် အကြမ်းဖက်လာတာကို ပြတ်ပြတ်သားသားအရေးယူ၊ဒါဘဲပြောချင်
တာ.ဒေါ်စုပြောသလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရေးကြီးတယ် . .ဒါဘဲ
ထောက်ခံ၏ ။အမှန်တွေ နည်းတဲ့အထဲမျာ ဒီလိုလေးတွေ ဖတ်ချင်တာ။
နယ်စပ်အရေးနဲလဲဆိုင်သပေ့ါဗျာ အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး နယ်စပ်က၀င်လာတာမဟုတ်လို့ မိုးပေါ်ကကျလာကြတာလား။
(၃)ပြသနာအစသည် တောင်ဂုတ်အမှုမဟုတ်ပါ။ ကျောက်နီမော်ကိစ္စကိုမပြောပဲ ကျောက်ဖြူကိစ္စကိုပဲပြော သည့်အတွက် post ပိုင်ရှင်မတရားပါ။
(၆) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာမရှိပါ။ ရခိုင်သမိုင်း၊မြန်မာသမိုင်း လေ့လာစရာကိုမလိုပါ။
(၉),(၁၀) အား (၅) နှင့်ပြန်ကိုက်ပါ (သတင်းတစ်ခုရလျှင်သေသေချာချာစုံစမ်းပြီးမှရေးပါ၊ပြဿနာကိုမဖွကြ ပါနှင့်)
ပို့စ် ရေးတဲ့သူက ဘယ်လို စိတ်ထားဆိုတာ ပေါ်နေပြီလေ နောက်ဆို ဝင်မဖတ်တော့ဘူး။ ဒေါသထွက်ရတယ်။
အဲဒိအဖြေကိုတွေ့ဖို့ မနေ့ မနေ့တွေက အမှိုက်ပေါင်းများစွာဖုံးနေတယ်လို့မြင်တယ်ဗျာ၊
ပထမဆုံး အမှိုက်မပုံရ ဥပဒေ(အမိန့်မဟုတ်ပါ)တစ်ရပ်အမြန်ထုတ်၊ အရင်ရှိပြီးသားအမှိုက်တွေကို တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းရှင်းရမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေအမှိုက်ကို ဖြစ်သလိုပစ်ခဲ့ကြတာ တော်တော်စိုးတယ်။ အမှိုက်ပုံတစ်ခုမှ recycle လုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။
့hnin ရေ .. ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ပဲနော …. တောင်ကုတ်ကလူတွေကို အခုစစ်ဆေးနေပါပြီ… အဲဒီအမှုပေါ်သွားလို့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်ဆေးအရေးယူတဲ့အခါကျရင်လဲ hnin မျက်နှာမပျက်ပါနဲ့နော် .. ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူပဲသတ်သတ် သူတပါးအသက်သတ်တာကိုမုန်းပါတယ် ။။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားမှာ သူများအသက်သတ်တာ ကုသိုလ်မရဘူးလေ .. ဘာသာရေးနယ်မြေချဲ့ထွင်ရင်းသေသွားလို့လဲ ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာ နိဗာန်မရောက်ဘူး ။ တစ်ချို့တွေရှိတယ်သိလား hnin ကိုပြောပြရဦးမယ် ဘာသာရေးအတွက် သူများအသက်ကိုသတ်ရင် ကုသိုလ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ် …………… ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ::_+)_(
အဲ့ဒါတော့ ကိုဝေးလွင့်တိမ် မှားပါတယ်။ဘာသာရေးအတွက်လဲ သူများအသက်ကိုမသတ်ရပါဘူး။
တတ်နိုင်သလောက်သီးခံ ခိုင်းပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှသာ ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခိုင်းတာပါ။
ကျန်တဲ့ အရေးကိစ္စတွေမှာ ကျနော်ဘာမှ မပြောလိုပေမယ့် အရေးယူသင့်တာကိုလုပ်ဆောင်ရမယ့်
ဘာသာတရားများအားလုံးသည် အပုပ်ချပြောဆိုခြင်းငှာ ခွင့်မပြုပကောင် သည်၊ဆိုးသည်လဲ မဝေဖန်
ရာ ဟု ထင်မှတ်လျှက်။
မတူတာတွေ ဘေးဖယ်ထား၍၊တူတာလေးများဖြင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းဆောင်
လူ မျိုး စွဲ ဘာသာ စွဲ ငါ စွဲ တွေ နဲ့အစွန်း ရောက် အကြမ်း ဖက် လုပ် ရပ်တွေကို အား ပေး အား မြှောက်လုပ် နေကြတော့ မယ် ဆို ရင် ခေတ် မီ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တက် တဲ့နိုင် ငံ တော် ကြီး ဆီ ရောက် ဖို့ ဝေး ရချည် သေး ထင်ပါ ရဲ့ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သေတာကိုး (၁၀) ယောက်သေတော့ ရွာလုံးကျွတ် လူ(၁၀၀) ချက်ခြင်းဖမ်းပြီဗျ
ဒါက သူတို့မွတ်ဆလင်ရွာကိုသွားပြီးဒါးနဲ့သွားခုတ်တာကို ဟိုကပြန်ခုခံတာနော် ၊အကြမ်းလာဖက်
တဲ့သူကို ရွာကခုခံတာ၊သူများရွာထဲမှဖြစ်တာ ပိုင်နက်မှာ၊သူတို့ပိုင်နက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး .အကြမ်းလာဖက်တဲ့သူကို ပြန်ခုခံတဲ့သူမွတ်ဆလင်ရွာကရွာသားအားလုံးဖမ်းပြီးထောင်ထဲတည့်ပြစ်တာ၊ ကျောက်နီမော် အရင်ကိစ္စတုံးကလဲ ရွာထဲကလူအားလုံးဖမ်းပြီးကျောက်ဖြူပို့ဖူးတယ် . .
တောင်ကုတ်လည်း မွတ်ဆလင်(၁၀)ဦးသေတော့ (၁၀၀) ပြန်ဖမ်းပေါဗျာ၊ တကယ်ဆိုဝိုင်းသတ်
တာ(၃၀၀) တောင်ပါ (၃၀၀) လောက်တော့ဖမ်းသင့်တာပေါ၊ဒါပေမယ် ယနေ့ထိတစ်ယောက်မှလက်ဖျား
နဲ့မတို့ . . . .သမ္မတကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေသိသင့်ပါပြီ . .